उमेर १७ पुग्दा उचाई ७१ सेमी, विश्वका जीवित हाेचामा तेस्राे हुन सक्ने - समृद्ध नेपाल
मलाई गर्भबती बनाउनेलाई ४ लाख दिन्छु !
विवाह पछि किन मोटाउँछन् युवतीहरु ? यस्तो छ तथ्य एक चोटी पढ्नुहोस !
विवाह अगाडि याै-न स”म्पर्क ‍ग’रेको महिला हेरेरै चिन्ने पाँच तरिका..जानिराखाै !
नाच्दा नाच्दै खुस्के पछि लाजले भयो भुतुकै भिडियोको लागि फोटोमा क्लिक गर्नु होस् !
आफू भन्दा कम उमेरकि म’हिलासँग स’म्बन्ध राख्दा भुल्नै नहुने यी ५ कुरा !
मेरो रात परे पछि धेरै चिलाउछ किन होला ? जान्नेले सम्पर्क गर्नु होला !
मेरो हेर्ने मन भए फोटोमा छुएर OPEN लेख्नु होस् आफै भिडियो खुल्ने छ !
ब्रम्ह कमलकाे फूल देख्ने बित्तिकै फोटो छोएर ॐ लेखी एक सेयर गरि दर्शन गरौ, तपाईले नसोचेको ७ दिन भित्र मनोकामना पूरा हुनेछ